पाल्पामा गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्यो » खबरहरुको एउटै केन्द्र
शनिबार, फाल्गुन २१, २०७३ १०:५७ मा प्रकाशित !
२१ फागुन, रामपुर (पाल्पा)। जिल्लामा गर्भपतन गराउने महिलाको सङ्ख्यामा बृद्धि भएको छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाल्पामा सुरु भएपछि गर्भपतन गराउने महिलाको सङ्ख्यामा बृद्धि भएको हो । पाल्पामा सन २००८ देखि सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुरु भएको हो ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाकाअनुसार सन २००८ मा तीन सय ६० महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गराएकोमा सन २०१६ मा नौ सय ९२ महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन । सन २०१७ को जनवरी र फेब्रुअरीमा एक सय ७२ महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन ।
त्यस्तै सन २००९ मा ६ सय २६, २०१० मा ६ सय ५८, २०११ मा पाँच सय ५५, २०१२ मा पाँच सय ५६, २०१३ मा पाँच सय २७, २०१४ मा आठ सय २६ र २०१५ मा सात सय ५४ महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका थिए ।
यीबाहेक जिल्लामा सञ्चालित लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभास र नेपाल परिवार नियोजन सङ्घबाट पनि केही शुल्क लिएर सुरक्षित गर्भपतन सेवा गराउँदै आएका छन । नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा २०७३ पुसदेखि निःशुल्क रुपमा उपलब्ध रहेको उनले बताए । यसभन्दा पहिले केही निश्चित शुल्कमा सुरक्षित गर्भपतन गराइने गरिन्थ्यो ।
जिल्लामा २० देखि ४० वर्ष सम्मका महिलाले बढी गर्भपतन गराउने गरेका छन । गर्भपतन गराउँदा स्वास्थ्यका लागि घातक मानिने हुँदा सकेसम्म गर्भनिरोधक औषधि जस्तै परिवार नियोजनका साधन अपनाउनपनि स्वास्थ्यकर्मीले सुझाव दिएका छन ।
२०७२ को माघबाट जिल्लाका धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गराउने सेवा थप गरिए पनि पछिल्लो समय निजी संस्थामा नभई सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा नै गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्दो छ ।
PREVIOUS POST Previous post: १५ जिल्लामा पोलियो खुवाइँदै
NEXT POST Next post: एमालेको मेची महाकाली अभियान सुरु
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शनिबार, फाल्गुन २१, २०७३ १०:५७
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शनिबार, फाल्गुन २१, २०७३ १०:५७
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शनिबार, फाल्गुन २१, २०७३ १०:५७
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शनिबार, फाल्गुन २१, २०७३ १०:५७
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शनिबार, फाल्गुन २१, २०७३ १०:५७